श्रेष्ठको कडा जवाफ ‘निमको बोट रोपेर सुन्तला फल्दैन’
काठमाडौं, २२ माघ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निमको बोट रोपेर सुन्तला फलेन भन्ने आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्था सम्बद्ध केही नेताहरूको कडा आलोचना गरेका छन् ।
अमेरिकी राजदूत र शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबीच भेट
काठमाण्डौं, २२ माघ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी र शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबिच भेट भएको छ ।
मिर्चैया महोत्सवको उद्घाटन प्रचण्डले गर्ने
सिरहा, २२ माघ । सिरहा जिल्लाको व्यापारीक नगरीको रुपमा बिकास हुँदै गएको मिर्चैयामा हुने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरण पुगेको छ ।
फोरमको लक्ष्य विभेद मुक्तिसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धि हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं, २२ माघ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ र ३१ को प्रथम वडा अधिवेशन पार्टीका सहअध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले दीप प्रज्वलन गरी संयुक्त रूपमा सिनामंगलमा उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा सडकमा बहस गर्ने विषय होइन : मुख्यमन्त्री पोखरेल
रुपन्देही, २१ माघ । प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिन प्रदेशसभा दिवस मनाएको छ । माघ २१ गतेको दिनलाई प्रदेशसभा दिवसको रुपमा औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाएको हो ।
प्रदेशको नाम, भाषा तथा राजधानी तोक्न प्रदेश प्रमुखद्वारा शुभकामना
जनकपुरधाम, २१ माघ । प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशको नाम, भाषा तथा राजधानी अहिलेसम्म नतोकिएकोले प्रदेश सभाबाट शीघ्र निर्णय गर्नका लागि शुभकामना दिएका छन् ।
कपिलवस्तुमा पनि कांग्रेसले गर्यो सरकार विरुद्ध विरोधसभा
कपिलवस्तु, २१ माघ । नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले तौलिहवामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।
राम मनोहरको शव प्रहरी नियन्त्रणमा
बाँके, २१ पुस । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता स्व.राम मनोहर यादवको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपालगन्जमा फोरमको निर्वाचन स्थगित
नेपालगञ्ज, २१ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बाँकेको नेपालगञ्जमा वडास्तरीय समिति गठनका लागि हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको छ ।
प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु
विराटनगर, २० माघ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ ।
नगरपालिका विकासमा यूटर्न लिएको छ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रौतहट, २० माघ । गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले नगरपालिकाले विकासको कार्यमा यूटर्न लिएको बताएका छन् ।
निलाम्बर आचार्यद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं, २० माघ । भारतका लागि नेपाली राजदूतको रुपमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका निलाम्बर आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मधेशको विकासका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ : प्रम ओली
सिरहा, १९ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई मधेशको विकासका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम अघि बढाएको बताएका छन् ।
अन्ततः पाँच महिनापछि शव बुझ्दै राम मनोहरका परिवार, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी
काठमाडौं, १९ माघ । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता स्व.राम मनोहर यादवको शव अन्ततः पाँच महिनापछि परिवारजनले बुझ्ने भएका छन् ।
काठमाडौं, १८ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सही बाटो र सही नीति लिएको बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राजपाको संशोधन प्रस्ताव
काठमाडौं, १७ माघ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राजपा नेपालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
महात्मा गान्धी विश्वकै महान् नेता
काठमाडौँ, १७ माघ । भारतको भूगोलमा जन्म भए पनि शान्ति, अहिंसा र मानवताका पक्षमा निडर भए कै कारण महात्मा गान्धी विश्वकै महान् राजनेताका रुपमा स्थापित हुनुभएको चर्चा गरिएको छ ।
संघीय सरकारको नारा कागजमै सीमित : मुख्यमन्त्री राउत
वीरगन्ज, १६ माघ । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सिंहदरबारमा लुटेरामात्र बसेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश नं २ को राजधानी जचुकालिमै रहन्छ : काँग्रेस नेता निधि
गौशाला, १६ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रदेश नं २ को राजधानी जनकपुर र प्रदेश सरकारको भवन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) मै रहने बताएका छन् ।
अधिकारका लागि अब कसैले पनि शहिद हुनु पर्दैन: प्रम ओली
काठमाडौं, १६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कसैले पनि अधिकारका लागि शहीद हुनु नपर्ने बताएका छन् । शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
शहीदहरुको बलिदानीले लोकतन्त्र र मानवअधिकार विरोधी शक्ति परास्त : प्रम ओली
काठमाडौं, १६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदहरुको बलिदानीले लोकतन्त्र र मानवअधिकार विरोधी शक्तिहरु परास्त भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको उपहास गरे : मिश्र
काठमाडौ, १४ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष मनिष मिश्रले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले स्ववियूको निर्वाचनको मिति तोकेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : प्रदेश प्रमुख
ब्रम्हानन्द ठाकुर, जनकपुरधाम, १४ माघ । प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले देश प्रदेश विकासको लागि ईन्जिनियरहरुले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ईपिजीको प्रतिवेदन मधेशले सिधै अस्वीकार गर्छ : अनिल झा
काठमाडौं, १३ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले मधेशले ईपिजीको प्रतिवेदनलाई सिधै खारेज गर्ने दाबी गरेका छन् ।